Abavelisi be-OTDR | China Umzi-mveliso we-OTDR kunye nabaxhasi
I-Mini-Pro OTDR isebenza kwi-FTTx kunye nofikelelo kulwakhiwo lwenethiwekhi kunye nokuvavanywa, ukuvavanya indawo yokuqhekeza ifayibha, ubude, ilahleko kunye nokukhanya kokufunyanwa okuzenzekelayo, uvavanyo oluzenzekelayo ngesitshixo esinye.
Uvavanyo lucwecwe kunye ne-3.5 intshi ye-LCD enombala, uyilo lweqokobhe elitsha, ubungqina bokothuka kunye nobungqina bolahleko.
Uvavanyo ludibanisa imisebenzi eyi-8 kunye ne-OTDR edityanisiweyo, iimephu zomnyhadala, ukukhanya kwesitalato sokukhanya, imitha yamandla okubonakalayo, indawo yokujonga iziphoso, ukulandelelana kokufundwa kwentambo, umlinganiso wobude bekhebula kunye nemisebenzi yokukhanyisa. Inokukhawuleza ukufumanisa indawo yokuqhekeza, isinxibelelanisi sendalo iphela, ukugcinwa kwangaphakathi kwe-600, ikhadi le-TF, ukugcinwa kwedatha ye-USB kunye nebhetri ye-lithium ye-4000mAh, ukutshaja kwe-USB. Lukhetho olufanelekileyo lomsebenzi wexesha elide.
I-NK5600 yeOptical Time Domain Reflectometer yeyokusebenza okuphezulu, isixhobo sovavanyo esisebenzayo esenzelwe inethiwekhi ye-FTTx. Imveliso inesisombululo esiphezulu se-0.05m kwaye inendawo encinci yovavanyo lwe-0.8m.
Le mveliso idibanisa i-OTDR / umthombo wokukhanya, imitha yamandla ebonakalayo, kunye nemisebenzi yeVFL emzimbeni omnye. Isebenzisa ukuchukumisa kunye neendlela eziphambili zokusebenza. Imveliso inonxibelelwano lwangaphandle olutyebileyo kwaye inokulawulwa kude nge-interface ye-Ethernet, okanye ngeendlela ezimbini ezahlukeneyo ze-USB, idiski engaphandle ye-U, umshicileli kunye nonxibelelwano lwedatha yePC.
I-Sfp C ++, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, IHuawei Qsfp +, Umthumeli weXfp, Imodyuli yeFiber Optical, Ixabiso leHuawei Olt,